WTF: Mukomana Mugomba ... RPG Kufambidzana Mutambo paKickstarter | Linux Vakapindwa muropa
Iwe unofarira dungeon vhidhiyo mitambo? Unofarira RPGs here? Iwe unofarira mitambo yemavhidhiyo yekufambidzana uye kushamwaridzana kwehukama seSims, Singles, nezvimwe? Zvakanaka, pandakaona iyi nhau ndakafunga WTF! Uye ini ndaida kuigovana newe, zviri nezve chirongwa Mukomana Mugomba iyo yave kutsvaga mari pasi peyakakurumbira yekutsvagisa chikuva KickStarter uye izvo zvinoita sekunge kunyangwe kushamisa kune vateveri vayo uye pakupedzisira kunosvika Linux, Mac neWindows.
Zvinoitika kuti mutambo wevhidhiyo-kurwa mugomba unoratidzika kuva RPG maitiro kwauchazoshandisa zvombo kurwa, uye uchasangana nevanhu vakanaka uye nekudaro unogona kuve nemazuva ekudzidzira kwako kukunda uye kuda hunyanzvi hwekukwirisa uye kuve nesimba rakanyanya pamwechete. Izvo zvinoita sezvisinganzwisisike ndiwo musimboti weBoyfriend Dungeon, uye zvinoita sekunge vanozvifarira nekuti vakatodarika chinangwa chekutanga chemadhora zviuru makumi mashanu uye vachida kusvika pachinangwa chinotevera cheinosvika madhora mazana mashanu ezviuru, asi chinangwa chinozokwanisika tichifunga izvo ivo vatoenda ku50.000 150.000 ...
Basa rako guru rinenge riri kupamba magomba zvinotaridzika kunge zvakasarudzika nekuda kwesitayera yakashandiswa nevagadziri veiyi zita. Uchasangana nezvikara zvine ngozi uye vavengi vaunofanira kuuraya kana iwe uchida kupasa chikamu, asi pamusoro peizvozvo, uchafanirwa kuve nemazuva ekudanana kuti uedze hunyanzvi hwako hwerudo, chimwe chinhu chinokubatsira iwe kudzidza nyaya uye kukwirisa.
Iwe unogona kuwana hushamwari kana rudo uye kugadzira vamwe vako vanokubatsira iwe kukunda mugomba. Iwe unenge uine zvombo zvinomwe kubva paminondo kuenda kumapanga, chiito chakavimbiswa, akasiyana masitayera ekurwa, zvepabonde, kudanana, hukadzi, ... Cocktail iyo inobvumidza iwe kutora mazuva ako kumakirabhu, mahombekombe, nezvimwe. Uye zvese izvi zvisina maturo zvichauya kuSteam mu2019 kana zvese zvikafamba mushe, saka ndinonzwa sekunge tichafanirwa kutaura nezvazvo muLxA zvakare kana yaburitswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » WTF: Mukomana Mugomba ... Kufambidzana RPG Mutambo paKickstarter